Ukuseta njani ukuKhanya kwamanqaku ama-3 kwiiVidiyo zakho eziBukhoma | Martech Zone
Besisenza ezinye iividiyo zikaFacebook eziBukhoma zabaxumi bethu sisebenzisa Isitshizi situdiyo kwaye uyithande ngokupheleleyo iqonga leevidiyo ezininzi. Indawo enye endifuna ukuphucula kuyo kukukhanya kwethu, nangona kunjalo. Ndiyividiyo entsha newbie xa kuziwa kwezi zicwangciso, ke ndiza kuqhubeka nokuhlaziya la manqaku ngokusekwe kwingxelo nakuvavanyo. Ndifunda itoni kwezinye iingcali ezijikeleze nam ngokunjalo - ezinye zazo endabelana ngazo apha! Kukho itoni yezixhobo ezilungileyo kwi-Intanethi.
Sinophahla oluyi-16 leenyawo kwisitudiyo sethu esinokukhanya okumangalisayo kwe-LED kwizikhukula. Isiphumo sezithunzi ezoyikekayo (esalatha ngqo ezantsi)… ke ndaye ndadibana nomzobi wevidiyo, uAJ I-Ablog Cinema, Ukuza nesisombululo esifikelelekayo, esinokuphatheka.
I-AJ indifundise malunga nokukhanya kwamanqaku ama-3 kwaye bendimangalisiwe yindlela endingalunganga ngayo ngokukhanyisa. Bendihlala ndicinga ukuba esona sisombululo sisibane se-LED esibekwe kwikhamera ekhomba ngqo kuye nabani na esidlan 'indlebe naye. Akulunganga. Ingxaki ngokukhanya ngokuthe ngqo phambi kwesihloko kukuba ihlamba ubungakanani bobuso kunokuba ibancome.
Yintoni ukukhanya kwamanqaku ama-3?
Injongo yokukhanya kwamanqaku ama-3 kukuqaqambisa kunye nokugxininisa ubungakanani besifundo (s) kwividiyo. Ngokubeka izibane ngobuchule zijikeleze umxholo, umthombo ngamnye ukhanyisa ubungakanani obahlukileyo besifundo kwaye wenze ividiyo enobude obukhulu, ububanzi, kunye nobunzulu… konke oko kususa izithunzi ezingathandekiyo.
Ukukhanyiswa kwamanqaku amathathu yeyona ndlela isetyenziswa ngokubonelela ngokukhanya okukhulu kwiividiyo.
Izibane ezithathu kwi-3-pointing Lighting zezi:
UkuKhanya okungundoqo - oku kukukhanya okuphambili kwaye kubekwe ngasekunene okanye ngasekhohlo kwekhamera, i-45 ° kuyo, yalatha kwi-45 ° ezantsi kumxholo. Ukusetyenziswa kwesasazisi kuyimfuneko ukuba izithunzi zinzima kakhulu. Ukuba ungaphandle ekukhanyeni okukhanyayo, ungasebenzisa ilanga njengokukhanya kokhiye wakho.
Gcwalisa Ukukhanya -Ukugcwalisa ukukhanya kukhanya kumxholo kodwa ukusuka kwikona esecaleni ukunciphisa isithunzi esiveliswe kukukhanya okungundoqo. Yasasazeka ngokwesiqhelo kwaye malunga nesiqingatha sokukhanya kwesitshixo sokukhanya. Ukuba ukukhanya kwakho kukhanya kakhulu kwaye kuvelisa isithunzi ngakumbi, ungasebenzisa isibonakalisi ukuthambisa ukukhanya-ukhombe ukukhanya kokugcwalisa kwisibonakalisi kwaye ubonakalise ukukhanya okungasasazwanga kumxholo.
UkuKhanya okungasemva - ekwabizwa ngokuba ngumtya, iinwele, okanye ukukhanya kwegxalaba, oku kukhanya kukhanya kumxholo ngasemva, ukwahlula umxholo ngasemva. Abanye abantu bayisebenzisa ecaleni ukuphucula iinwele (ezaziwa njenge umkhabi). Uninzi lweefoto zevidiyo zisebenzisa ifayile ye- ukukhanya okukodwa ejolise ngqo endaweni yentloko esasazeke kakhulu.
Qiniseka ukuba ushiya umgama phakathi kwesihloko sakho kunye nemvelaphi ukuze ababukeli bakho bajonge kuwe endaweni yokukungqonga.
Ukuseta njani ukuKhanya kwamanqaku ama-3
Nantsi ividiyo emnandi, enolwazi ngendlela yokuseta ngokufanelekileyo ukukhanya kwamanqaku ama-3.
Izibane ezinconyelweyo, ubushushu bombala, kunye neeDiffusers
Ngengcebiso yomfoti wam wevidiyo, ndathenga ezona ziphathwayo Ukukhanya kweAmaran izibane ze-LED kunye 3 ye izixhobo zeqabaka ezinomkhenkce. Izibane zinokuxhotyiswa ngokuthe ngqo ngeepakethe ezimbini zebhetri okanye eziplagiweyo kunye nombane ohamba nazo. Sathenga namavili ukuze sikwazi ukuwahambisa ngokulula eofisini njengoko kufuneka.
Ezi zibane zinika amandla okulungisa ubushushu bombala. Enye yeempazamo ezenziwa ngabafoti beevidiyo ezintsha kukuba baxube ubushushu bombala. Ukuba usegumbini elikhanyisiweyo, unganqwenela ukuvala naziphi na izibane apho ukunqanda ukungqubana kombala obushushu. Sivalela iimfama zethu, sicime izibane ezingaphezulu, kwaye sibeke izibane zethu ze-LED kwi-5600K ukubonelela ngeqondo lobushushu elipholileyo.
Siza kufaka ezinye izibane ze studio ezithambileyo ngaphezulu kwetafile yethu ye-podcasting ukuze sikwazi ukwenza iifoto zethu zepodcast ngeFacebook ngoku kunye neYouTube Live. Kungumsebenzi wokwakha omncinci njengoko kufuneka sakhe isakhelo esixhasayo ngokunjalo.
Ukukhanya kweAmaran izibane ze-LED Izixhobo zeFrost Diffuser
Ukubhengezwa: Sisebenzisa amakhonkco ethu abambiseneyo eAmazon kwesi sithuba.
tags: Ukukhanyisa ngamanqaku ama-35600kukunyanzelisaaputure amaranukukhanya okungasemvaIkhithi efanelekileyo yokukhanyisagcwalisa ukukhanyaukukhanya kweenweleukukhanyaumkhabiukukhanya komkhabiumbala okhanyayoisibonakaliso sokukhanyaithiyori elulaUkukhanyisaikhithi ekhanyayolightsukukhanya okukodwaikhowudiisitudiyo sokutshintshaukukhanyisa ividiyoikhithi yokukhanyisa ividiyoizibane zevidiyo